फोटोग्राफि एक कलात्मक साहित्य हो : प्रमोद भट्टराई - MeroReport
फोटोग्राफि एक कलात्मक साहित्य हो : प्रमोद भट्टराई
संखुवासभाका प्रमोद भट्टराई हाल सुदुर पश्चिमाञ्चलमा कार्यरत छन् । नेपालका पचहत्तर जिल्लाहरु मध्ये चौसठ्ठी जिल्लाहरु घुमिसकेका प्रमोदको पचहत्तरै जिल्ला घुमि फोटो प्रोफाइल प्रकाशन गर्ने उदेश्य छ । कहिलेकाहिँ साहित्यिक क्षेत्रमा कलम चलाए पनि प्रमोदको प्रमुख रुचि भने फोटोग्राफीमा रहेको छ । भ्रमण गर्न मन पराउने प्रमोद भ्रमण सँगसँगै फोटोग्राफी गर्न पाउँदा रोमान्चक महसुस गर्छन् । भ्रमण र फोटोग्राफीका अलावा फोटोब्लगिङमा पनि उनी सक्रिय छन् । मेरो रिपोर्टको साप्ताहिक स्तम्भ साताका ब्लगरमा आज हामीले उनै प्रमोद भट्टराईसँग कुराकानी गरेकाछौं । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानी :
म आफुलाई फोटोग्राफीको दुनियाँमा भर्खरै पाईला चाल्दै गरेको फोटोग्राफर भनेर चिनाउन चाहान्छु।
मैले सन् २००९ बाट ब्लगिङ शुरु गरेको हुँ । जुन बेला म ग्रामिण विकासमा स्नातकोत्तर गर्दै थिए । ग्रामिण विकास विषयका किताबहरू प्रशस्त नपाईले हुनाले आफैंले बनाएका नोटहरु पोष्ट गरी ब्लगिङ शुरु गरेको हुँ ।
ब्लग शुरुबारे मेरो रमाईलो घटना छ । खासमा सन् २००७ तिर एक साथिले ब्लगबाट पैसा कमाईन्छ भन्दै विज्ञापन गरेका थिए र त्यही लहैलहैमा लगेर धेरै ब्लग अकाउन्टहरु खोलियो जुन निरन्तर भएनन् तर लेख्नकै लागी भनेर चाहिँ सन् २००९ मा मात्र शुरु गरें । पछि लेखन मात्र नभएर फोटोहरु पनि पोष्ट गर्न थाले अनि ब्लग शिर्षक फोटोज एन वर्डस ( Photos N’ Words ) बनाए ।
आफ्नो फोटो तथा शब्दहरु पोष्ट गर्न ब्लग एकदमै महत्वपुर्ण प्ल्याटफर्म लाग्दछ ।
ब्लगिङका लागि खासै विषयवस्तु छानिरहन्न, मनमा लागेको शब्दहरु तथा मनले छोएका फोटोहरु पोस्ट गर्छु । कहिलेकाहिँ अनुसन्धान तथा समसामयिक विषयवस्तुहरु समेत पोष्ट गर्छु ।
तपाईले फोटोज एन वर्डस बाहेक अरु पनि चलाउनु हुन्छ ?
मेरो यो भन्दा बाहेक अरु ब्लग चलाउँदिन ।
तपाईको त फोटो ब्लग, अनि भन्न खोजिएका कुराहरु फोटोले सबै ब्यक्त गर्न सकिन्छ ?
सबै भन्न खोजिएका कुराहरु फोटो मार्फत ब्यक्त गर्न सकिदैन । त्यस्तो बेला फोटो क्याप्सन राख्नु वा फोटोको बारेमा केहि शब्दहरु लेख्नु जरुरी हुन्छ ।
मनका भावहरुलाई ब्यक्त गर्न शब्दमा सहज हुन्छ कि फोटोमा ?
फोटोग्राफि एक कलात्मक साहित्य हो । यसलाई आफ्नो सिप त मिहिनेतले प्रभाब पर्दछ । सहज शब्द र फोटो दुबैमा छैन । र पनि सकेसम्म फोटोबाट नै भावहरु व्यक्त गर्न कोशिस गर्छु।
तपाईको फोटो ब्लग हेरेर पाठकले कस्तो प्रतिक्रिया दिनु हुन्छ ?
सल्लाह सुझाब सहितका सकारात्मक प्रतिक्रियाहरु पाइरहेको छु ।
भ्रमण मेरो मुख्य रुचि हो । अध्ययन र खेलहरुमा मेरो बिषेश लगाव छ साथै समाज सेवा गर्न पाउँदा मन खुशी हुन्छ ।
सकेसम्म समाबेश गर्ने कोसिस गर्छु, आफ्नो दैनिक कार्यालयको समय बाट फुर्सद भएको बेला फोटो खिच्ने अनि पोष्ट गर्ने गर्छु । कुनै कुनै आफ्नै कार्य क्षेत्रका विषयहरु पनि समाबेश गर्छु ।
रमाईलो भन्दा पनि कुरा फोटो चोरिको हो । एक जना ब्लगरले धर्तीको स्वर्ग रारा ताल (महेन्द्र दह) फोटो कथा भन्ने शिर्षकको पोष्टबाट फोटोहरु कपि गरि मेरो वाटरमार्क समेत हटाएर आफ्नो ब्लगमा पोष्ट गर्नु भएछ । मैले थाहा पाएर फोटो किन चोरि गर्नु भो भन्दा उहाँले होईन भनि निकै जिद्दि गर्नु भयो । अनि मैले आफ्नो ओर्निनल फोटो पठाए । बल्ल चोरि स्विकार्नु भयो र माफि पनि माग्नु भयो । यसरी फोटो चोरि हुँदा निकै दुख लाग्छ र फोटो चोरि नगरिदिनु हुन पनि सबैमा अनुरोध पनि गर्दछु ।
म पनि ब्लगिङ नागरिक पत्रकारिता हो भन्न चाहान्छु । किनकि, यो एउटा यस्तो ठाउँ हो‍, जहाँ प्रत्येक नागरिकले आफुलाई लागेको बिचार, कला, साहित्य तस्बिर सूचनाहरु पोष्ट गरि विश्वसामु फैलाउन कसैको चाकरी गरिरहनु पर्दैन ।